မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစားသုံးနိုင်သောမှိုများစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းပညာတိုးတက်လာခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရန်continuousရိယာများဆက်လက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးသည့်အပင်အရေအတွက်တိုးများလာခြင်းတို့ကြောင့်မှိုများသည်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုတွင်ငွေသားအဓိကသီးနှံဖြစ်လာသည်။ မှိုစိုက်ပျိုးသောareaရိယာတွင်နှစ်စဉ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစွာထုတ်လွှတ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်က ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်မွေးမြူရေးပစ္စည်းများမှ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်လတ်ဆတ်သောမှိုများကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီး ၆၀ ကီလိုဂရမ်ရနိုင်သည်မှိုအကြွင်းအကျန်စွန့်ပစ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေရုံသာမကသယံဇာတအမြောက်အများကိုပါစွန့်ပစ်သည်။ သို့သော်မှိုစွန့်ပစ်အမှိုက်များကိုဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်လူကြိုက်များသည်။ ၎င်းသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုသိရှိရုံသာမကမြေဆီလွှာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မြေဆီလွှာကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။မှိုအကြွင်းအကျန်ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ.
မှိုအကြွင်းအကျန်များသည်ပျိုးပင်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများကြီးထွားရန်အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများပေါများသည်။ အချဉ်ဖောက်ပြီးနောက်၎င်းအားဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မှိုအကြွင်းအကျန်များသည်မည်သို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဘဏ္treာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်သနည်း။
1. သောက်သုံးသောအချိုး - ပိုးမွှား ၁ ကီလိုဂရမ်မှိုမှိုအကြွင်းအကျန်၏ 200 ကီလိုဂရမ်ကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအရင်ကြိတ်ခွဲပြီးအချဉ်ဖောက်သင့်သည်။ မှေးမှိန်နေသောပိုးမွှားများနှင့်မှိုအကြွင်းအကျန်များသည်ကောင်းစွာရောထွေး။ စုပုံထားခြင်းခံရသည်။ သင့်လျော်သော C / N အချိုးရရှိရန်အတွက်ယူရီးယား၊ ကြက်ချေး၊ နှမ်းကျန်သို့မဟုတ်အခြားအရန်ပစ္စည်းများကိုသင့်လျော်စွာထည့်သွင်းနိုင်သည်။
၂။ အစိုဓာတ်ထိန်းညှိခြင်း - မှိုအကြွင်းအကျန်များနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကိုအညီအမျှရောစပ်ပြီးသောအခါရေစုပ်စက်ဖြင့်ရေဖြန်းပြီးရေစုပ်စက်ဖြင့်ရေဖြန်းပြီးကုန်ကြမ်းအစိုဓာတ် ၅၀% အထိမပြတ်တွန်းပါ။ အနိမ့်အစိုဓာတ်သည်အချဉ်ပေါက်ခြင်းကိုနှေးကွေးစေပြီးအစိုဓာတ်မြင့်မားခြင်းကစုပ်၏အားနည်းနေသည်။
၃ ။ ဆွေးလှည့်: ပုံမှန် stack ကူး။ သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများသည်သင့်လျော်သောရေနှင့်အောက်စီဂျင်ပါဝင်သောအခြေအနေများအောက်တွင်အော်ဂဲနစ်အားတိတ်တဆိတ်တိုးပွားစေပြီးအပူချိန်မြင့်မားစေသည်။ ရောဂါပိုးများနှင့်ပေါင်းပင်အစေ့များကိုသေစေပြီးအော်ဂဲနစ်တည်ငြိမ်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိစေသည်။
၄။ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု - အကောင်းဆုံးကစော်ဖောက်ခြင်း၏အပူချိန်သည် ၁၅ above အထက်ဖြစ်သည်။ ကစော်ဖောက်ခြင်းသည်တစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အပူချိန်နိမ့်ကျပြီးအချဉ်ပေါက်ခြင်းကြာသည်။
၅။ ကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးဆုံးခြင်း - မှိုအချပ်ပုံ၏အရောင်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ အချဉ်ပေါက်ခြင်းမပြုမီအဝါရောင်ဖျော့ဖျော့၊ အချဉ်ပေါက်ပြီးနောက်မှောင်မိုက်သောအညိုရောင်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် EC သည်အချဉ်ပေါက်ခြင်းမပြုမီနိမ့်ကျပြီး၊ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်.
တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်ကြီးထွားလာသည့်ဒေသများကိုစမ်းသပ်ရန်ကစော်ပြီးနောက်မှိုအကြွင်းအကျန်များကိုအသုံးပြုပါ။ မှိုအကြွင်းအကျန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်၏ဇီဝဗေဒလက္ခဏာကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူဖြစ်သည်၊ နှင့်တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်အထွက်နှုန်း 11.2% တိုး, ကလိုရိုဖီးပါဝင်မှု 9.3% တိုးမြှင့်, ပျော်ဝင်သကြားပါဝင်မှု 3.9% တိုး, အာဟာရအရည်အသွေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အဆောက်အ ဦး ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ ဒေသတွင်းသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ၊ စျေးကွက်စွမ်းရည်နှင့်အကျယ်အ ၀ န်းတို့ကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုမှာတန် ၄၀၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀၀ အထိရှိသည်။ နှစ်စဉ်တန်ချိန် ၁၀,၀၀၀ မှ ၄၀,၀၀၀ တန်အငယ်စားစက်ရုံအသစ်များ၊ အလယ်အလတ်အပင်များအတွက်တန် ၅၀,၀၀၀ မှ ၈၀,၀၀၀ နှင့်ကြီးမားသောအပင်များအတွက်တန် ၉၀၀၀၀ မှ ၁၅၀,၀၀၀ သင့်လျော်သည်။ အောက်ပါအခြေခံမူများကိုလိုက်နာသင့်သည် - သယံဇာတဝိသေသလက္ခဏာများ၊ မြေဆီလွှာအခြေအနေများ၊ အဓိကသီးနှံများ၊ စက်ရုံတည်ဆောက်ပုံ၊
အသေးစားအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကုန်ကြမ်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်တိကျသောကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြည့်စုံသည် မှိုအကြွင်းအကျန်ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ယေဘုယျအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုး၊ အထူးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မြေယာကုန်ကျမှု၊ အလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရောင်းအားနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် ။ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစနစ်တကျလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကိုရွေးချယ်ထားသရွေ့နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ချသည်။